महँगीले उपभोक्ताको ढाड सेकियो, किन मौन छ सरकार ? – Deep Sanchar
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ महँगीले उपभोक्ताको ढाड सेकियो, किन मौन छ सरकार ?
महँगीले उपभोक्ताको ढाड सेकियो, किन मौन छ सरकार ?
दीप संञ्चार भदौ ३१, २०७८ गते ६:४३ मा प्रकाशित
नेपाल खुद्रा व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवित्रकुमार ब्रजाचार्य अहिलेको बजार भाउ सामान्य रूपमा लिन सकिने कारण देख्दैनन् । ‘कुनै कारणबिना नै ठूला थोक व्यापारीहरूले मनपरी ढंगले मूल्यवृद्धि गरिरहेका छन्,’ उनको भनाइ छ ।बज्रचार्यका अनुसार चिनी प्रतिकिलो १० देखि १५ रुपैयाँ वृद्धि भएर ९५ देखि १ रुपैयाँ पुगेको छ । खाने तेलको मूल्य लकडाउनयता मात्र प्रतिलिटर सय रुपैयाँ बढेको छ । सनफलावर तेल लकडाउनअघि १ सय ६५ रुपैयाँ पाइन्थ्यो भने अहिले २ सय ६५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
‘उपभोक्ताको भान्सामा दैनिक नभई नहुने खाने तेल, चिनी, हरियो तरकारी, दाल गेडागुडीमा व्यापारीले मूल्य बढाइरहेका छन् । तर, सरकारले अस्वभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न छाडेर व्यापारीलाई नै साथ दिएपछि कसको के लाग्छ रु’ महर्जन भन्छन् ।
विभागले बजार अनुगमनलाई व्यापक बनाएको र कैफियत भेटिएका व्यापारिक फर्मलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिरहेको पनि प्रवक्ता सेढाईंको भनाइ छ ।आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।